आज नेपाल पैसा पठाउँदै हुनुन्छ ? हेर्नुहोस यस्तो छ बिनिमय दर – Ap Nepal
आज नेपाल पैसा पठाउँदै हुनुन्छ ? हेर्नुहोस यस्तो छ बिनिमय दर नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमेरिक डलरको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको निर्धारण गर्दछ तथा विदेशी मुद्राको कारोबारको सुपरिवेक्षण “नेपाल राष्ट्र बैंक” पाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ ।
उदाहरणको लागी नेपालमा अमेरिक डलको विनिमय दर १०० नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमेरिक डलरको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको निर्धारण गर्दछ तथा विदेशी मुद्राको कारोबारको सुपरिवेक्षण “ नेपाल राष्ट्र बैंक” पाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ । आजको मुद्राको दर यसप्रकार रहेको छ………
यो पनि हेर्नुहोस… आज घट्यो सुनको मुल्य, तोलामा कति घट्यो त? ४ माघ, काठमाडौं । आज एकै दिन सुन तोलामा सात सय रुपैयाँले घटेको छ । सुनको भाउ आज तोलामा ९१ हजार ८ सय रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै सुनको भाउ घटेकाले नेपाली बजारमा पनि सस्तो भएको महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले बताए । उनका अनुसार आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिऔंस १८ सय ३० डलर छ । यो अस्ति शुक्रबारको भन्दा २० डलर सस्तो हो । अमेरिकामा राष्ट्रपतीय चुनावमा विजयी भएका जो बाइडेनको कार्यकाल सुरु हुन लागेकाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ घट्न थालेको व्यवसायीको अनुमान छ । जो बाइडेनले आउँदो बुधवार सपथ ग्रहण गर्दैछन् ।
यस्तै, आज चाँदी पनि आज तोलामा ३० रुपैयाँले घटेर १२ सय ३० रुपैयाँमा झरेको महासंघले जनाएको छ ।
Prevजानिराखौं- यी ३ सʼमस्या भएकाहरुले भुलेर पनि नʼखानुहोस् ओखर
Nextअण्डा खानुहुन्छ ? एकदिनमा कतिवटा अण्डा खाँदा स्वाʼस्थ्यमा हानी पुग्दैन ? जानिराखौं
इन्डो, नेशियाकि केटीसँग प्रेम विवाह, भन्छिन् ”अहिले नेपालमा ल्याएर बिचल्ली बनाए” (भिडियो हेर्नुस्)
अमलासँगै भित्रको दाना पनि यति उपयोगी यस्ता समस्यालाई टाढा राख्छ
“मौरी मेरो भगवान” भन्दै चाका सहितको मौरी बे, चेर धनी भएका चेपाङ आए मिडियामा-हेनुहोस् (भिडियो सहित )
एउटा अनोठो बिवाह : आफैँसँग आफैले सिन्धुर हालेर विवाह गरेकी दुलही एक्लै हनिमुनमा जाने